Kuchena (HPLC): 98.0% min
Pchinyorwa saizi: <15um: 90min
Kurongedza & Dhirivhari:
25kg / dhiramu, 8mt / FCL
UN Nha. 2811, Kirasi: 6.1, Kurongedza boka: III
Chitarisiko: Isina kuchena kune yakajeka yeyero mvura Yese Amine Kukosha (mg KOH / g): 280-303 Mvura: 0.3% max Yakanangana Gravity pa25 / 15.6 oC: 0.800-0.820 Ruvara (Gardner): 2max Neutralization Yakaenzana (g / mol): 185-200 160kg / simbi dhiramu, 15Mt / ISO tangi UN Kwete. 1922, Kirasi: 8, kurongedza boka: III, Inogona kushandiswa seyakagadzirisa modifier uye yakanyanyisa kumanikidza antiwear mumiriri weasina mafuta soluble antiwear mumiririri nekuda kweayo akanakisa solubility yemafuta. ; ☑ Inogona kushandiswa seyakawedzera yekuwedzera yekuvandudza s ...
☑ Yaishandiswa muindasitiri, mishonga, nemagetsi; ☑ Chigadzirwa chinonyanya kushandiswa mukugadzirira kweakakosha zvigadzirwa zveantipsychotic zvinodhaka, senge fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, nezvimwewo. mishonga yezvipembenene, mhondi dzemazai, mapurasitiki uye mapurimisi resin. Iyo condensation ye fluorobenzene ne γ - chlorobutyryl chloride inogona kuburitsa γ ̵ ...
Chitarisiko: Transparent mvura Kachena: 99.9% min Mvura: 0.03% max Ruvara (Pt-Co): 10 max Hydrocyanic Acid (mg / kg): 10max Ammonia (mg / kg): 6max Acetone (mg / kg): 25max Acrylonitrile ( mg / kg): 25max Propionitrile (mg / kg): 500max Fe (mg / kg): 0.50max Cu (mg / kg): 0.05max 150kg / dhiramu, 12Mt / FCL kana 20mt / FCL UN Nha. 1688, Kirasi: 3, Kurongedza boka: II hemChemical kuongorora uye chishandiso kuongorora. Acetonitrile inogadzira organic uye solvent kune yakatetepa layer chromatography, bepa chromatography, inotaridzika ...
200kg / dhiramu, 16Mt / FCL kana ISO tangi Zvinhu zvisina ngozi ☑ Inoshandiswa pamabhizimusi, agrochemical Active ingriedient synthesis, madhayi uye mishonga. LGlass fiber polyester zvinhu, izvo zvinomhanyisa iyo polymerization; anobatsira mumiriri wekugadzira ion ion resin uye acrylic resin; ☑ Iyo inoshandiswa mukugadzira varnish yeasaturated polyester; wemishonga anobatsira mumiriri wekugadzira schistosomiasis, penicillin uye chloramphenicol; polymer Polymerization ...
Kg200kg / dhiramu, 16mt / FCL kana ISO tangi ☑UN No. 2929, Kirasi: 6.1, Kurongedza boka: Ini, Methyl fluoroacetate ikemikari ine chepfu, inogona kukurudzira maziso, kufema uye ganda, uye zvine njodzi kubata nenjodzi. FLUOROACETIC acid inogona kutsva uye inogona kuburitsa hydrogen fluoride gasi, kemikari ine chepfu, painopiswa. Iko kusvibiswa kwemethyl fluoroacetate ndeyekuti iyo hydrolyzes kugadzira FLUOROACETIC acid, iyo inosangana necoenzyme A yesero mitochondria kuumba fluoroacetyl CO ...
☑ Kuporesa mumiririri kana accelerator ye epoxy resini; Muindasitiri yemishonga, vepakati veimwe API, senge Imazalil, Tioconazole, Bifonazole. ☑ Yakakosha mishonga yezvipuka mbichana ye synergist ye boric acid, kugadzirira kwemushonga wezvipembenene uye bhakitiriya. Id Imidazole chinhu chakakosha mbishi uye chiri pakati chemakemikari indasitiri, ine zvakawanda zvekushandisa. Imidazole haipo chete mu purine amino acids ye ribonucleic acid uye deoxyribonucleic acid, asiwo mu ...
☑ Catalyst mu polyurethane, yakashandiswa mu polyurethane flexid yakaoma furu uye elastomer kuwedzera hupenyu hwehari, sunga maitiro uye kuwedzera yekupedzisira cross-lin density. CanInogona kushandiswa sekuporesa mumiririri we epoxy resin, kugadzirisa michina zvivakwa zvakadai sekukotama, kutambanudza uye kumanikidza, kugadzirisa magetsi emagetsi ekuputira uye kusagadzikana kwemakemikari. Inoshandiswa zvakanyanya mumakomputa nemagetsi emagetsi; inoshandiswa mumabhodhi edunhu akadhindwa uye maseketi akasanganiswa se ...
Chitarisiko: Chena kusvika ingangoita chena crystalline, hygroscopic Kuchena (Titration): 99.0% min Mvura: 1.0% max Toluene: 0.2% max kusazivikanwa kusachena: 0.05% max Yese kusachena: 0.2% max PH kukosha: 11-12.5 25kg / dhiramu, 9Mt / FCL Zvinhu zvisina ngozi ☑ Iyo yaishandiswa mumishonga. Cle Cyclen nemidziyo yayo inoratidza kusarudza kwekubatanidza zvivakwa zvekuchinja simbi cations, heavy metal cations, lanthanide uye actinide ions, uye kunyangwe kune organic kana inorganic anion. Hunhu chaihwo hwekutenderera uye ...